Guddoonka Baarlamaanka oo Raaligelin ka bixiyey Warbixintii Guddiga Maaliyadda, dibna ula noqday [Daawo] | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Guddoonka Baarlamaanka oo Raaligelin ka bixiyey Warbixintii Guddiga Maaliyadda, dibna ula noqday [Daawo]
Dood xasaasi ah ayaa ka dhacday fadhigii maanta ee Baarlamaanka Federaalka, iyadoo looga dooday warbixin ay diyaariyeen qaar ka mida Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka oo xukuumadda ku eedeysay lacago maqan iyo wax is daba marin.
Waxaa fadhiga ka hadlay xildhibaanno iska horjeeda oo ka tirsan Guddiga oo qaarkood sheegay inaysan la socon warbixinta, ayna sharci ahayn qaabka loo dhigay, kadibna waxay xubnaha guddiga maaliyadda is dhaafsadeen hadallo iska horjeeda.
Wasiirka Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixin ka bixiyey lacagta la sheegay inay maqan tahay ee musuqmaasuqay, waxaana la sheegay inay 50-ka Milyan doolar ee ka timid Sacuudiga la isticmaalay 35 Milyan oo ka mida, iyadoo 15-ka milyan ee kale ay harsan tahay oo ay taallo.
Wasiirka Maaliyadda, ku xigeenkiisa iyo Wasiiru dowlaha ayaa si kulul u weerarray xildhibananda soo diyaariyey warbixinta oo qaarkood la sheegay in Qandaraasyo gaara ay dowladda ka joojisay oo dano gaara ay difaacayaan, waxaana wasiir Beyle uu sheegay in lagu heysto fulinta mashaariic.
Ugu danbeyntii guddoomiye ku xigeenka labaada ee Baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay inay khalad ahayd qaabka warbixinta ay ku timid Golaha baarlamaanka, markii Guddi ka mida Guddiyada Golaha Shacabka uu warbixin keenayo ay tahay in raaco nidaam ah in marka hore loo gudbiyo Guddiya Joogtada ah oo markuu ka doodo kadib la keeno Golaha.
Mahad Cawad ayaa raaligelin ka bixiyey warbixinta guddiga maaliyadda ee la keenay Golaha oo khaladkeena ay leeyihiin Guddoonka, wuxuuna intaas ku daray in Guddiga maaliyadda oo kala qeybsan iyo warbixinta oo aan wax caddeyn ah wadan ay ka dhigayaan inay tahay mid wax kama jiraan ah.
“Waxaan raaligelin ka bixinaynaa in Golaha la keeno xeer ama howl aan lala wadaagin Guddiga Joogtada ah iyo Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana raaligelin ka bixinaynaa haddii khalad naga dhacay. Guddiga Maaliyadda oo ah guddi aad u shaqo badan, waxaa ka yimid duleel, waxayna guddigu sheegeen in ay ku wada hadleen whatsapp-ka. Baarlamaanku ma sheegin in la lunsaday $40 milyan. Waxaan ka siinaynaa raaligelin shacabka iyo Wasaaradda Maaliyada, warbixintaanna hab-raac sax ah lama soo marsiin. Xeerkaan halkaas ayaa looga gudbayaa, dib dambena looma keeni karo Golaha” ayuu yiri Mahad Cabdalla Cawad, oo sidoo kale sheegay inuu Kulanka Golaha Shacabku xiran yahay.
Wasiirka Maaliyadda C/raxmaan Beyle: "Waxaa laygu haystaa mashruuc ii fuli..." (Akhriso+Daawo)